FIFANDRAISANA ARA-BAROTRA : Vokatra voahodina no tokony haondran’i Madagasikara
“Ny fampiroboroboana ny tontolon’ny indostria no hahafahana mampandroso haingana an’i Madagasikara”, hoy ny mpahay toekarena, Holijaona Rabaona izay sady filohan’ny “Emergence de Madagascar” raha nanazava ny mahakasika ny fifandraisana ara-barotra eo amin’i Madagasikara sy ireo firenena hafa izy. 15 mai 2019
Raha itodihana ny lasa, tao anatin’izay 58 taona handray 59 nahazoan’i Madagasikara fahaleovantena izay dia nionona fotsiny ho firenena mpandray ireo vokatra voahodina avy any ivelany ary nanondrana ireo vokatra tsy mbola voahodina avy eto an-toerana i Madagasikara. Ireo vokatra tsy voahodina alefa any ivelany ireo anefa ny ankabeazany dia anaovan’ireo firenen-dehibe “tatireraka” sy vidiany amin’ny vidiny ambany dia ambany ary averiny aty amin’ny firenena andalam-pandrosoana tahaka an’i Madagasikara indray rehefa voahodiny saingy amin’izany dia avo efatra na avo dimy heny noho ilay vidiny nanondranana azy no vidiny.
Hialana amin’izany sy hanehoana ny hambopom-pirenena, araka ny fanamby napetraky ny Filoha indrindra no nilazan’ity mpahay toekarena ity fa tokony hohindrahindraina sy aely patrana eran-tany ny “Made in Madagascar” na ny vokatra vita eto Madagasikara. Tsy maintsy omena sehatra, hoy izy ny indostria manara-dalàna eto Madagasikara ka ny vokatra voahodina no tokony halefa any ivelany mba hahafahana manome asa ny tanora tsy an’asa. Nohazavainy ihany koa fa raha ny tokony ho izy dia farafaharatsiny isaky ny Distrika dia misy orinasa iray afaka manome asa ny mponina eo an-toerana ary toy izany hatrany hatrany no tokony hampiharina eny anivon’ny Kaominina sy ny fokontany. Ankoatra ireo anefa dia ilaina ihany koa ny fanamafisana ny lalàna mifehy ny fandraharahana eto Madagasikara mba ho ny vahoaka Malagasy no hisitraka ny tombotsoa voalohany amin’ireo tetikasa miorina eo ambonin’ny taniny.